Temarios opposiciones Correos 2022 ▷ zviite kuti zvivandudzwe HERE! | Kuumbwa uye kudzidza
Tumira zvinopesana ajenda
Mushure mekuburitswa kweiyo kuziviswa kwekushora kwaCorreos, inguva yekutumira mafomu. Gore negore, Correos irikuburitsa matsva ekuti bvunzo dzemakwikwi dzideredze avhareji zera revashandi, saka inogara iri nguva yakanaka yekutanga kudzidza Kupikisa kuCorreos. Kana iwe uchida kudzidza zvakawanda, pano tinokuudza zvese.
Yakagadziridzwa ajenda eCorreos kupokana
Pazasi iwe unowana ese mapakeji atinawo ane akagadziridzwa eposvo ajenda kuti iwe ugone kubvumidza zviri nyore pamutengo wakanakisa wemusika. Vanopfuura 95% vanopfuura mukushorwa kwaCorreos kunotitsigira!
Iyi ndiyo sarudzo yakachipa uye izere nezvose kubvira mukuwedzera pakugamuchira mavhoriyamu maviri neakavandudzwa ajenda kubva kuCorreos, iwe uchawanawo:
Bhucha kugadzirira bvunzo dzepfungwa
Dzinoseka bvunzo kuita
Miedzo yekugadzirira bvunzo
Kuwana webhusaiti yepamhepo zviwanikwa zvinozokubatsira kuti uwedzere kugadzirisa kugadzirira kwako kufona.
Iyo premium pack ndeyevaya vanoda kugadzirira pamwe nekugona pabvunzo sezvo, pamusoro peizvo zvinosanganisirwa musaga rekuchengetedza, iwe unozogashira akateedzana ezvimwe zvinonakidza zvinowedzera:
Glossaries uye zvemitemo mareferenzi nemusoro wenyaya
Schematics uye mifananidzo kuti zvive nyore kudzidza
Pfupiso yemusoro wenyaya wega uye gwara rekufunda
Dzinoseka bvunzo ine chaiwo maficha
Makosi ane ekudzidzira matekinoro yekugadzirira bvunzo
Mapiritsi ekutsanangura ezvinyorwa zvakakosha
Inopindirana nedzidziso yezvinyorwa
Bvunzo kubva kufoni dzapfuura dzakaongororwa
Iwe zvakare uchave nekuwana kune iyo academy kwemwedzi mitatu kana gumi nemaviri mwedzi, zvinoenderana nenguva yaunofanirwa kudzidza.
Premium Pack nemwedzi mitatu yechikoro
Muchiitiko chekuti iwe haufarire mapakeji aya, iwe zvakare unemukana wekutenga zvigadzirwa zvaunoda iwe wega. Idzi ndidzo sarudzo dziripo:
Agenda chete: iyi ndiyo yose Post Office ajenda yakagadziridzwa kusvika kwekupedzisira kufona.
Dzinoseka bvunzo: dzidzira bvunzo nenzira yakapusa uye inoshanda kwazvo.
Mabhuku ekupasa psychotechnics: hunyengeri hwekuwana giredhi rakanaka kuita zvese zvinobvira bvunzo. wakamirira chii?
Kugadzirira kweakawanda sarudzo bvunzo: nemibvunzo yakawanda kuti uzive nezverudzi urwu rweyedzo.
2020 kudaidzira kwemashure-op kupikisa
Correos yakadana nzvimbo mazana matatu nemakumi mana nemaviri ekudaidzwa kwegore ra3.421. Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti nzvimbo dzese idzi dziri kuwedzera chiyero chenyika. Ipapo, uchafanirwa kuenda ku kuziviswa kwekushora kwaCorreos uye uwane zvinzvimbo zvepurovhinzi imwe neimwe.
Kana iko kufona kwavhurwa, zvakakodzera kuti ubvunze bvunzo yakatimirira. Ndezve imwe bvunzo yakajairwa uye maviri chaiwo, zvese zvekugovera uye zvekupatsanura uye kushandira vatengi. Chekutanga, chakajairwa bvunzo, chakavakirwa pane yakawanda sarudzo sarudzo yemakumi matanhatu mibvunzo. Ivo chete gumi vavo ndivo vanove psychotechnical. Kuti uite izvi, wese anopikisa anozove nemaminitsi makumi mashanu nemashanu. Iyo bvunzo iyo yakatarwa zvakare yakawanda sarudzo. Asi mune ino kesi, pachave nemakumi mana emibvunzo uye iyo yakanyanya nguva inowanikwa kune vanopikisa maminetsi makumi matatu nemashanu.
Kana iwe wapasa iyo kuongorora uye kubvisa chikamu, ipapo chikamu chekuongorora chezvaunowana chinosvika. Zvimwe zvezviyero zvinowana zvibodzwa zvinotevera:
Vakuru muPost Office. Zvisinei nechinzvimbo chichaitwa, mukati memakore manomwe apfuura.
Wakaita mabasa mudunhu akakumbirwa.
NdeyaJobo Boards ese ari maviri chaiwo chinzvimbo uye mudunhu.
Yunivhesiti Dhigirii kana Yepamusoro Degree Professional Kudzidziswa muHurumende, Management, Commerce, Kushambadzira uye IT
Makosi ayo ane hukama nenzvimbo dzakashandiswa.
Bvumidza A kana A1, matatu mapoinzi. Rezinesi rekutyaira, poindi imwechete.
Tumira zvinopesana zvinoda
Iva nemakore gumi nemasere uye asati asvitsa makore makumi matanhatu nemashanu ekuberekwa.
Inomanikidzwa Sekondari Dzidzo Chinyorwa, kana iyo Chikoro cheChikoro uye Chero humwe hunhu hwepamutemo hunogona kutsiva iro rekutanga degree.
Kusina chero rudzi rwebasa rakagadziriswa nePost Office.
Asina kudzingwa kana kuparadzaniswa nebasa.
Iva nemasimba anodiwa kuti uite mabasa anodikanwa.
Iva neSpanish nyika, kana kanenge kuva mugari weEuropean Union. Ita kuti mapepa ebasa agare akarongeka, kuti uite basa.
Kuti uve wekutumira posvo munhu, unoda iyo A, A1 kana B kadhi.
Maitiro ekusainira iwo Correos anopikisa
Izvo zvakanyorwa zvekushora kwaCorreos zvichaitwa kuburikidza neayo peji repamutemo. Kana nguva yekunyorera yapera, tinogona kunyoresa pamhepo. Kuti unyore, iwe unofanirwa kutevedzera akati wandei matanho:
Iwe unozopinda iro peji re Correo.es, ipapo iwe uchaenda kune 'ruzivo rwemakambani', 'Hunyanzvi', 'Basa' uye pakupedzisira ku 'yakatemwa mari yemunhu wega'.
Nhanho inotevera ndeye 'Kunyoresa Kunyorera'. Muchikamu chino, uchafanirwa kuisa ID yako pamwe nephasiwedi, uchitevera matanho aunopiwa newebhu.
Nhanho yechitatu ndeiyi kufukidza yako pachako data. Nguva dzose tarisa kuti ese ari echokwadi uye usakanganwa kuverenga mutemo wega.
Iye zvino uchafanirwa kusarudza dunhu raunoda kushanda, pamwe nebasa raunoshuvira.
Para pedza kunyoresa, unofanira kubhadhara iyo mitero iri gumi nemaviri euros. Hongu, isati yave gumi euros asi ivo vakwira kumusoro. Nzira yekubhadhara ndeye kadhi. Kana kubhadhara kwacho kwave kuongororwa, iwe uchagamuchira chinongedzo chekukumbira uye humbowo hwekubhadhara.
Dzimwe mhando dzemagwaro pamwe nemazita aunawo, haazodikanwa panguva ino, asi anozodiwa muzvikamu zvinotevera. Ehezve, kuti uite chero shanduko, iwe uchafanirwa kukanzura iyo yapfuura chikumbiro uye zadza imwe nyowani zvakare.
Vashandi veposvo mihoro
Chokwadi ndechekuti nyaya yemihoro inogara iri imwe yemibvunzo inowanzo bvunzwa. Inofanira kutaurwa kuti iyo yekupedzisira nhamba inogona kugara ichisiyana. Sezvo zvinoenderana nemari yekuwedzera, kukura, chinzvimbo uye zvimwe zvinhu zvekufunga nezvazvo. Asi zvakadaro, isu tine zviyero zvekufungidzira kuti tikupe zano:
Executive vashandi: Mukati merudzi urwu rwevashandi isu tichawana iro basa remugadziri, mushanduri, nharembozha, mushandisi, nezvimwe. Ivo vese vane muhoro unotangira kubva ku1300, 1500 kusvika kuXNUMX, XNUMX euros.
Base vashandi vepamutemo: Zvishoma pasi mubhadharo wevashandi ava. Asi ichokwadi kuti inosiyana zvishoma, saka tiri kutaura nezve 1200 kusvika 1400 euros. Izvi zvinonzi ndiwo muhoro kana wenguva dzose muhoro.
Kurongedza uye kugovera vashandi: Zvese mukuru wedunhu uye musaruro kana kugovera netsoka vane muhoro pakati pe1100 ne1300 euros. Zvakafanana nevashandi vadiki.
Vabatsiri vashandi: Mune ino kesi, vabatsiri vashandi vanozove nemubairo we1080 uye 1200 euros.
Zvirongwa zvePost Office
Iyo syllabus yekupokana kweCorreos ine gumi nematatu misoro yakajairika iwe yaunofanirwa kuziva:
Nhaurwa 1: Zvekare uye / kana zvakanyoreswa mabasa eposvo, pamwe nezvigadzirwa zvavanotaura.
Nhaurwa 2: Inotarisa pane e-Commerce uye chikamu chikamu.
Nhaurwa 3: Maitiro ebhizinesi uye zvimwe zvakawanda zvinowedzera, pamwe nemamwe masevhisi.
Nhaurwa 4: Kusiyanisa kwehunyanzvi hwevashandi, basa rinoitwa mumahofisi eposvo.
Nhaurwa 5: Dhijitari Management: Dhata uye manejimendi muCorreos.
Nhaurwa 6: Mamwe masevhisi uye zvakasiyana zvigadzirwa.
Nhaurwa 7: Kubvuma maitiro.
Nhaurwa 8: Kurapa kwemapakeji, mitemo yekutakura.
Nhaurwa 9: Dhirivhari protocol.
Nhaurwa 10: Zvinhu zvemubatanidzwa (Zvishandiso senge PDA's, IRIS uye zvimwe zvakawanda zvakakosha pakuita kwemushandi pachinzvimbo chake kana pamabasa aanoita.
Nhaurwa 11: Kwevatengi sevhisi uye kurapwa: Hukama ihwohwo, maitiro ekuva nehunhu kurapwa hunobatsira mufananidzo wekambani.
Nhaurwa 12: Bhizinesi rebhizinesi, chimiro chepamutemo chekambani uye nzira yekutengesa yekutevera
Nhaurwa 13: Mitemo yekuenzana pakati pevakadzi uye ruzivo rwepamutemo runoenderana nemhirizhonga yechikadzi pabasa. Kudzivirira kubiridzirwa kwemari uye kujekesa, kuzvipira mutsika uye chibvumirano cheruzivo maererano nekuchengetedza (LOPD).
Iyi misoro yese ndeyechikamu chakajairika kana chedzidziso. Asi pamusoro pezvo, iwe uchafanirwa kupfuudza iyo psychotechnics. Kune izvi, iwe une ma syllabus mabhuku, ayo anogara ari echimanje uye zvakare chimwe nezvose zvaunoda kuti ugone kukunda chikamu chepfungwa chepfungwa. Usakanganwa kudzidzira nevamwe kuseka bvunzo, pamwe nedzimwe mhando dzezvinhu izvo zvinobatsira iwe kugadzirira iyo yakawanda sarudzo bvunzo. Sega kana pamwe chete, ivo vanozove sarudzo yakanaka yekuisa mabhatiri kuti uwane nzvimbo yako.
Zvakanakira kushanda muCorreos
Kune zvakawanda zvakanaka zvekushanda muCorreos. Iko kushora kunopihwa nematunhu. Naizvozvo, unogona kusarudza yako, pamwe nenzvimbo yekutamba. Mubairo wake wakanyatsokodzera zvekuti ndeimwewo yemabhenefiti kutarisisa. Sezvo, yakaderera ichaenda pamusoro pe1000 euros.
Iwo marongero ebasa anofanira kuitwa akakoshawo kana uchifunga nezvawo. Kuve uzere kana chikamu chenguva. Kune ese ari maviri panogara paine nzvimbo dziripo. Uye zvakare, isu tinofanirwa kufunga kuti isu takatarisana ne basa rakasimbiswa uye yeupenyu, nezvose izvi zvinobatanidza. Kana ukaratidza asi usingawani nzvimbo yako, une imwe sarudzo. Iwe unogona kupinda muPost Office Job Bank. Unogona kuiwana uye iwe uchazoshanda nenguva, asi ichokwadi kuti izvi zvichaverengerwa mune chakakodzera chikamu.